Vichyssoise - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
menaka43 minitraOlona 4
Ity dia iray amin'ireo fanosotra tiako indrindra. Fototry ny nahandro nentim-paharazana tsy hita tao an-tranoko izany.
Amin'ny lafiny roa no anaovako azy: ity iray ity, ilay honko sy ovy mahazatra, ary iray hafa izay soloina ny ovy ho an'ny paoma. Matetika aho no manova azy ireo satria samy tianay be izy ireo ary amin'izay dia mahazo menio miovaova isan-karazany aho ary tsy dia mitovy foana ny fahandroako azy.
Ho fanampin'izany, ny vichyssoise dia azo alaina ao amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona satria azo tompoina na mafana na mangatsiaka.
Ronono miompana no ampiasako amin'izany maivana fa raha crimième no tadiavinao dia azo soloina crème crème mitovy hanina ary tonga lafatra.
Fomba fahandro tonga lafatra amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona.
Fotoana hiketrehana: 43M
Fotoana manontolo: 43M
Katsaka 300 g (ny ampahany fotsy ihany) no nendahina ho lasa silaka
Menaka oliva 50 g
Rano 700 g
Ovy 250 g
Dipoavatra fotsy 1 pinch
Ronono miakatra 200 g na crème 200 g handrahoina
Chives na persily ho an'ny haingo
Napetrakay tao anaty vera sy programa ilay paiso madio sy voatetika 4 segondra, hafainganam-pandeha 5. Ampidininay ny sisa tavela tavela amin'ny rindrina sy eo amin'ny saron'ny vera, miaraka amin'ny spatula.
Ampianay ny menaka sy dibera. Izahay dia manao fandaharana 12 minitra, maripana varoma ary hafainganam-pandeha 1.
Manampy rano sy programa 200 g izahay 1 minitra, hafainganana mandroso 5-7-10 ary noho izany potipotehina tanteraka ny boka.
Ampio ny ovy voatetika, sira, dipoavatra ary rano 500 g sisa. Izahay dia manao fandaharana 20 minitra, mari-pana 100º ary hafainganam-pandeha 1.
Izahay dia nanimba ny fandaharana 1 minitra, hafainganam-pandeha 7.
Manampia sakamalaho voamadinika sy ilay ronono na crème etona. Izahay dia manao fandaharana 8 minitra, mari-pana 90º ary hafainganam-pandeha 3.
Manompo amin'ny sakay na persily voatoto izahay.
Fanazavana fanampiny - Apple sy Leek Vichyssoise
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Salady sy legioma, Latsaky ny adiny 1, Lasopy sy menaka, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Lasopy sy menaka » Vichyssoise
Manu catman dia hoy izy:
Saika tsy namela hevitra mihitsy aho satria manaintaina ny mameno zavatra betsaka nefa ny Vichyssoise tsy vitako ny nanohitra ny fahamarinana ... mahagaga izany! Ataoko be dia be amin'ny fahavaratra ary tena matsiro tokoa ...
Valio amin'i Manu CatMan
Manu, mitranga aminao toa ahy io, tiako ny menaka fanosotra. Tsy maninona izany rehefa ririnina fa tsy amin'ny fahavaratra. Oroka.
Nahavita an'io aho androany ary tena tsara tokoa na dia tsy maintsy nanampy sira bebe kokoa aza aho satria somary Sosa io. Noho ny habetsaky ny antsipiriany dia feno ny verako manontolo. Amin'ny manaraka dia asiko antsasaky ny. Na eo aza ny lesoka kely dia tsara be ilay crème. Misaotra anao.
Ny zavatra iray azonao atao dia ny mampihena ny maripana kely sy ny fandaharana minitra vitsy hafa. Misaotra tamin'ny hevitrao.
Misaotra betsaka amin'ny torohevitrao. Tsaroako izany amin'ny manaraka.
maria texan dia hoy izy:
Tiako, ataoko isan-kerinandro, lovia mahavelona izy ary mora atao
Valiny tamin'i Maria Tejano
Misaotra Maria !!
Paul jose dia hoy izy:
Misaotra anao..! Tena tsara ..
Valiny tamin'i Pablo Jose
Tiako ny vichyssoise! Torohevitra iray, manokatra koka akoho iray aho, manondraka azy ary mandraraka azy ambony ambony ao anaty vichyssoise, manome azy "tsiro" manokana. Marihiko ny hevitrao momba ny paoma ary andramako izany rahampitso, tsy maintsy ho vice io!
Misaotra anao tonga eo isan'andro, miaraka aminao eo anilako ny fahombiazan'ny Krismasy tamin'ity taona ity, fahombiazana. Tohizo fa ianao no tsara indrindra!
KISSES ARY MANIRAKA ANAO TSARA TSARA INDRINDRA IZAO amin'ity famaranana vao navotsotra ity.
Valiny tamin'i M. Carmen
Salama M. Carmen, manantena aho fa tianao ilay paoma, hoy ianao amiko. Marihiko ny trondro akoho ary andramako amin'ny manaraka. Miarahaba anao ary misaotra betsaka anao nahita anay. Hanohy amin'ny resinay izahay ary manantena aho fa hitia azy ireo hatrany.
Olaa dia toa nandoko an'io i Wena saingy tiako ho fantatra hoe ohatrinona ny maripana hatramin'ny 80º k ambany?. Fiarahabana
Salama jubilo89, mieritreritra aho fa maharitra 15 minitra ny fampidinana. Esory amin'ny basiny ilay vera dia hidina haingana izy. Manantena aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
Salama, nanao ahoana ny fety? Te hanontany anao aho satria ny sabotsy no fitsingerenan'ny andro nahaterahako ary salama tsara ny fianakaviana ary te-hanao sotro fromazy vaovao aho nahita ny fomba fahandro nataon'i Argiñano fa tsy haiko ny mamindra azy amin'ny thermomix, afaka manome tombony ahy ve ianao, misaotra anao ……………….
Salama Sandra, tsy haiko izay resipeo tianao holazaina.
salama dieny izao dia manamboatra ny crème ho an'ny rahampitso aho, ary miandry ny hilatsahan'ny maripana, nosokafako ny vera ary hitako fa tsy novonoina ny ovy, normal ve izany? .
Misaotra betsaka fa mamaky anao isan'andro aho ary tiako ny resinao. fiarahabana.
!!!!! miala tsiny !!!! Mandroso aho. Tsy mbola namaky antsipiriany iray aho, ny iray hatramin'ny 1 minitra ka hatramin'ny
hafainganam-pandeha 7 ary mazava ho azy, EXPECTACULAR !!. Vitako tamin'ny crème satria tsy haiko hoe inona ilay ronono etona ary azo antoka fa mampihena kely anao io, sa tsy izany? Misaotra anao indrindra.
Salama Silvia, faly aho fa tianao izany. Izy io dia azo atao amin'ny ronono misavoana (ronono "Mety") na amin'ny crème, matsiro amin'ny lafiny roa. Mirary ny soa indrindra.
amin'ny teny iray: mahafinaritra !!!!
tao an-trano dia tianay izany, tonga lafatra.
Mieritreritra ny hanome azy io ho iray miavaka manokana aho mandritra ny andro iray izay ananan'ny vahiny, apetraho eo ambonin'ireo lovia vita amin'ny voanjo miaraka amin'ny tongolo lay sy persily ary aroso ao anaty lovia. inona ny hevitrao?
Pepi, heveriko fa hanome anao rendrarendra. Heveriko fa hevitra tsara izany. Miarahaba ary tena faly aho fa nankafizinao izany.
Caterina dia hoy izy:
tsara ny recette
Valiny amin'i CATERINA
Faly aho fa tianao izy ireo, Caterina! Mirary ny soa indrindra.
Vao nanao ity fomba fahandro ity tamin'ity anarana hafahafa ity aho ary mahavariana, nataoko hisakafoanana rahampitso, fa ny vadiko kosa tsy nahatohitra ny fandraisako azy hisakafo hariva. tena tsara. Andro vitsy lasa izay dia hitako ity pejy fahandro ity ary tena faly aho. Miarahaba anao ary misaotra anao nizara ny resipeo.
Misaotra betsaka anao Laura! Tongasoa !.
Omaly izahay dia nanana ny crème ho an'ny sakafo hariva, tiako be izany. Ahoana ny fahitanao azy ehh, hehehe. Tsy diso iray ianao 😉
Misaotra betsaka, Lidia! Faly aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
PINE AGUIAR BRAVO DE LAGUNA dia hoy izy:
TE HANDRAY NY RESITRAKA IZAO, INDRINDRA TIAKO NY KITCHEN, FA TSY MISY BOKY REHETRA.
MIarahaba ary manantena ny hizara aminareo REHETRA, NY ET ET REHETRA.
Valio amin'i PINO AGUIAR BRAVO DE LAGUNA
Salama Pino, misorata anarana amin'ny "famandrihana amin'ny alàlan'ny mailaka" ary isaky ny mamoaka fomba fahandro izahay dia horaisinao amin'ny mailakao izany. Na izany na tsy izany, zahao ny fanondroana resahina satria manana mihoatra ny 350 ny resety Thermomix navoakanay. Manantena aho fa tianao izy ireo. Mirary ny soa indrindra.
Nanandrana ilay vicyhyssoise aho ary tsy nivoaka tsara, dia narahiko ny dingana rehetra mankany amin'ilay taratasy afa-tsy ny fihenan'ny maripana hatramin'ny 80º, na dia tsy izany aza no antony, sa tsy izany? Tsy nanam-potoana niandrasana ela toy izany aho, tonga amiko ny famerenana azy fa ny fanorotoroana ny zava-drehetra amin'ny farany, toy ny nataoko tamin'ilay crème zucchini izay tsara, ahoana hoy ianao?
Etsy ankilany, izaho dia tena novice, mbola andro faharoa amin'ny thermomix ahy io
Valiny tamin'i Montserrat
Salama Montserrat, mila angon-drakitra misimisy kokoa izahay, maninona no tsy nety taminao izany? Inona no nanjo azy? Ny fiandrasana azy hilatsaka amin'ny 80º dia fiarovana bebe kokoa noho ny zavatra hafa rehetra, satria ankoatr'izay, ny thermomix, azo antoka ho fiarovana, dia tsy mahatratra ny hafainganam-pandeha 10 raha mihoatra ny 80º haingana be izany. Izaho, ianao dia mamerina azy io rehefa tonga ao amin'ny boky Essential (azo antoka fa nomeny anao tamina thermomix anao izy ireo) dia ho hitanao ny vokany. Tsy hahomby izy io. Angamba nisy dingana tsy nety nataonao ... Hilaza aminay ianao!
Te-handray ireo resipeo avoakao amin'ny mailaka aho
Valiny tamin'i Martina
Salama Marina, raha miditra amin'ny pejin'ny thermorecetas ianao, eo ankavanana dia manana boaty ianao manao hoe "famandrihana amin'ny mailaka". Raha avelanao any ny adiresy mailakao dia hahazo ny resinay rehetra. Misaotra tamin'ny liana!
Ataoko ny vichyssoise, manitra izy fa mamelona.
ny andro hafa dia nanao ny crème zucchini aho ary tena nahomby. Andao hojerentsika izany, manao ahoana ianao?
Misaotra Snowgarcia! Ataoko be ao an-trano izany, tiako ny tsirony ary misy karazany maromaro… tsy ho ela aho dia handefa vichisoise artichoke… mmmm fahafinaretana.
Piar Bonet dia hoy izy:
Salama, te hanontany anao aho raha ny crème no ataoko fa tsy ovy miaraka amin'ny paoma mitovy ary ny fomba fanomanana azy dia mitovy?
Valiny tamin'i Piar Bonet
Salama Piar Bonet, tsy milaza ny fanovana aho satria ny ovy dia misy starch ary manampy crème sy crème amin'ny crème. Amin'ny fanoloana azy ho an'ny paoma dia hahavery anao ilay fatorana sy ny endriny. Ny azonao atao dia ny manolo paoma iray amin'ny ampahany amin'ny paoma, azo antoka fa matsiro izy. Misaotra !! Moa ve noho ny karazana tsy fandeferana?
GoodiiiiisimA. Misaotra betsaka amin'ny recette
Misaotra anao Marta!
Salama, nataoko fotsiny ilay recette sy ny boka niraikitra tamiko. Inona no tsy nety nataoko? Manana ny TM21 aho. 10 minitra no nataoko fa tsy 12. Misaotra betsaka.
Mery dia hoy izy:
Napetrako ihany koa rehefa notolorako azy tongolo nendasina ambonin'ilay natsipy tao anaty salady ary tena tsara.
Valiny tamin'i Mery
Hevitra tsara inona Mery, misaotra tamin'ny fizarana azy 🙂
AZONAO H soloina ve ny crème na ny ronono miova?
Valio amin'i MAXIMO
Salama Maximo, azonao atao ny manampy an'io ronono io ihany raha tianao. Misaotra nanoratra taminay!
Tian'ny fianakaviana iray manontolo izany.
Mavi mahafinaritra, faly be izahay! Misaotra nanoratra taminay 😉
Salama, vitako io ary nivadika ho tsara be, ny hany zavatra tiako no somary matevina kokoa.Raha asiana boka fanampiny ao aho dia ho tsara ve izany? Satria tsy te-hanampy ovy bebe kokoa aho
Salama Pilar, tsara kokoa raha ahenao kely ny ron-kena, ka tsy mila manampy akora fanampiny 🙂 Misaotra anao nanoratra taminay!